China's Hawaii: Sanya mutsva wepamhepo mukurumbira wekushandisa kushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China's Hawaii: Sanya mutsva wepamhepo mukurumbira wekushandisa kushanya
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sanya, guta rine mukurumbira revashanyi, riri kumaodzanyemba kweHainan, rakaita nhamburiko huru kuvaka guta rechiratidzo reInternational Tourism Consumption Center nekutora mukana wekuChina kuvaka Hainan Free Trade Port Zone nenzvimbo yekushandiswa kwevashanyi vekunze.
Munguva pfupi yadarika, pane runyorwa rwe "Top 100 Cities in China's Tide Economy 2021", yakadhindwa pamwe nevezvenhau vepamusha, matangiro ekufunga uye masangano ebasa reInternet, Sanya, ane mukurumbira we "Hawaii yeChina", aive zvakare pane rondedzero. chinzvimbo chemakumi matatu nemana pakati pemaguta mazana matatu nemakumi matatu nenomwe muChina, sekureva kwePublicity Dhipatimendi reCPC Sanya Municipal Committee.
MuChina, maguta akawanda ari kugadzira zvinyorwa zve "Online Celebrity" akasiyana. Mamaneja eguta haangoratidze humunhu hweguta kune veruzhinji kuburikidza nekupisa kweinternet, simba reguta, hupenyu hwazvino, kusimudzira maindasitiri, asiwo kugadzira marongero emaguta, kugadzira mifananidzo yeguta uye kukurudzira simba rehupfumi reguta nenzvimbo dzaro dzakatenderedza.
Recently, Sanya, guta rine mukurumbira revashanyi, riri kumaodzanyemba kwe Hainan, yaita nhamburiko huru yekuvaka mureza weguta reInternational Tourism Consumption Center nekutora mukana wekuvakwa kweChina Hainan Yemahara Trade Port Zone uye yepasirese yekushanya yekushandisa nzvimbo. Kunze kweiyo inonyanya kuzivikanwa yekushanya-yemahara yekutenga, Sanya, inodziya uye inonyorova mukati megore, yave nzvimbo yakakurumbira yevashanyi vane inonakidza mitambo yegungwa, yakasarudzika yepamusoro-yekupedzisira hotera enclave uye akawanda anozivikanwa emitambo zviitiko uye mimhanzi zviitiko. Kunyanya pasi pesimba reCCIDID-19 denda, vashanyi veChinese, vasingakwanise kuenda kunze kwenyika, vaona Sanya seanotsiva ane mukurumbira.
Sanya Municipal Administration of Culture and Tourism yakataura kuti Sanya acharamba achivandudza tourism management mode mune ramangwana, achitarisa kusimudzira mafomu ezvekushanya anodarika gumi akadai se cruise tourism, yacht tourism, health tourism, international education tourism, sports tourism, high- kupedza kushanya kwekuratidzira, kupfumisa hurongwa hwezvigadzirwa zvekushanya kwezororo uye kukwezva vashanyi vepasirese.